ပါဝါ:15KW + 0.4KW + 0.4KW တစ်ခုတည်းအဆင့်
စွမ်းရည်:120~ 150kg / h
ကုန်ကြမ်းများ:ပြောင်းဖူးမှုန့်, ငါးမုန့်ညက်, အရိုးမုန့်ညက်, အသားမုန့်ညက်, ပဲပုပ်အမှုန့်,အမိုင်နိုအက်ဆစ်စသည်တို့
ခွေးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်ခွေးစားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက်တိုးတက်စေရန်အတွက်ဒီဇိုင်းသစ်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သည်, ငါတို့နှစ်ပေါင်းများစွာစားနပ်ရိက္ခာစက်ယန္တရားအပေါ်သုတေသနအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူအောင်မြင်စွာတီထွင်ထုတ်လုပ်သည်. ဤသည်ခွေးအစားအစာထုတ်လုပ်စက်သည်ဝတ္ထုပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အတူအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာကိုခံ, ထူးခြားတဲ့အရသာနှင့်အရောင်. ခွေးအစားအသောက်ထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်ခေတ်မီစျေးကွက်၏အခြားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးသာလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောသိပ္ပံနည်းကျအာဟာရပုံသေနည်းနှင့်လွယ်ကူသောဝါးမြိုခြင်းအဖြစ်. ပြီးတော့ဒီခွေးအစာထုတ်လုပ်တဲ့စက်ကအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစားအစာကိုဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ခေတ်သစ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူပိုပြီးရေပန်းစားပါလိမ့်မယ်.
ခွေးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိုအဆင့်မြင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာအဖြစ်အစေ့များကြိတ်ရန်အသုံးပြုသည်,ထိုကဲ့သို့သောခွေးအစားအစာအဖြစ်,ကြောင်အစာ, ငါးများအတွက်ရေနေအစာကျွေးလုံးလေးများ, ငါးခူ, ပုစွန်, ဂဏန်း,ကြက်,ဝက်,ဆိတ်သငယ်,စသည်တို့.
ခွေးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်ပြောင်းဖူးမှုန့်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်, ငါးမုန့်ညက်, အရိုးမုန့်ညက်, အသားမုန့်ညက်, soyabean အမှုန့်,လုံးလေးများအမိုင်နိုအက်ဆစ်.
1.အဆိုပါနည်းပညာဆိုင်ရာ parameter သည်, ထိုကဲ့သို့သောကုန်ကြမ်းအဖြစ်, အပူချိန်, နှင့်ဤခွေးအစားအစာအောင်စက်၏အစိုဓာတ်ကိုချိန်ညှိသည်. ဒီ extruder စက်မှထုတ်လုပ်သောခွေးအစာတောင့်များသည်လှပသောအသွင်အပြင်ရှိသည်, ထူးခြားသောအရသာနှင့်ဆန် - အာဟာရ, ကွဲပြားခြားနားသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်ငါးများအတွက်သင့်လျော်သော.
2.ခွေးအစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိုတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, ထိုကဲ့သို့သောခွေးအဖြစ်, ကြောင်, ငါး, မြေခွေး, ငှက်များနှင့်အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ.
4.VICTOR ခွေးအစာတောင့်စက်သည်ဝက်အူထုတ်သည့်နည်းကိုအသုံးပြုသည်. ခွေးစာထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ် ,အရာကြိတ်ကုန်ကြမ်းကနေချောထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးရန်, တစ်ခုမှာတစ်ကြိမ်မှာလက်စသတ်.
ခွေးအစာထုတ်လုပ်စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို